Kudhonza Matinji (Part 1) Kudhonza Matinji (Part 1)
MATINJI agara aripo paMukadzi wese asi madiki saka zvichinzi dhonzayi Matinji akure kana kureba.
Musikana wese anozvarwa ane Matinji but nekukura kwevakadzi muviri inosiyana Uye zvinodawo kunzwisiswa kana MUNHU wanzi dhonzayi Matinji usati Tete kana Ambuya vanopenga nekuti vanoitira iwewe Mukadzi KUNYANYA.
MATINJI tinoziva kuti kune mamwe marudzi vanoita zvekuMANIKIDZA VASIKANA kudhonza, avo Chokwadi vakaKOMBORERWA nekuti vanoitwa INSPECTION kuona kuti vari kuDhonza Matinji kana Muromo weNHENGO YEMUKADZI.
Vamwe vanodhonza Makongo kaBeans vachiti ndiro Dinji, nekuti vanenge vangoudzwa kuti dhonzayi vasina kuratidzwa kuti aya ndoMatinji.
Matinji anobatsirawo kuitwa MIPENDERO yeMbutu kuisawo mukati seGANDA reNHENGO YEMURUME unogona kurivharisa NHENGO YEMURUME paBonde kudziviriri kurwadzisana mukadzi kana ane dambudziko rekunonoka kutotota kana achikasika kuwoma muchiita Bonde Foreskin inobatsirawo Mukadzi kuti aregerewo kuSVUUKA. Izvi zveForeskin ndiri kutaurirawvo varume vanoziva zvekuita kana mukadzi ati zviri kurwadza, ndivo vanogadzirisawo ganda reNHENGO YEMURUME yavo kuti paBonde varege kuRwadzisana.
MADZIMAI NYAYA yedu iri paMATINJI.
MATINJI paChirunji achinzi INNER LABIA, Mukadzi anenge adhonza Matinji chiziva kuti Matinji anodawo kuita seNHENGO YEMURUME iri muBhurugwa Matinji anogona kushaisa Mukadzi mufaro achifamba nekuti anogona kungobuda muTHONG kana muG-STRING usinga fungire. Tichazo taura Nyaya yeHUTSANANA nekuPFEKWA kweMATINJI muPART 2.
Madzimai MATINJI anobatsirawo imi kunyanya panoitwa BONDE, varume vanongodawo zvekubata Chete asi kutaura chokwadi Matinji anobatsira iwe muridzi.
Ukanzwa munhu anoti NHENGO INHENGO mumwe kuNyaradzana nevamwe asi chokwadi tiri kudawo kubatsira vanoda Matinji coz Matinji ndivo zvekare anonzi Chibwezela, ChilandilaMbolo kureva kuti MudzoraNyini hakuna MUSHONGA unokunda Matinji kudzora HENGO YEMUKADZI Hakuna MUSHONGA unokunda Matinji kuti NHENGO YEMUKADZI ridziye
Chikure kuziva zvauri kuita nekuti kare vasikana vamwe vaigara vari 2 vachidhonzana Matinji. Uye vaitoita seMUTAMBO kuti pakugeza vanogeza vari 2 vachidhonzana.
Vapedza kuita Basa vanoitawo chero nguva yavanoita Free vanovharirana mumba vodhonzana zvekare, Nguva yekurara kare vanhu vayitandara dzimba dzeShamwari dzavo vachidhonzana.
Ini ndotauravo zvisinganetse kuita PAKUDHONZA Matinji wakura kana vaZvara, SHANDISAYI VASELINE kana kutora Bottle reCOOKING OIL rapera mafuta moshandisa anenge achibuda muBOTTLE. Asi zvinoTSVEDZA kubata Kutsvedza kuitira kuti musaSVUURE NYAMANHETE
APA TIRI KUUDZA VANODA kwete VASINGADE.
Panyaya yekudhonza Matinji ahina Nguva chero munhu uri FREE chete dhonzayi Matinji, mumwe anorara neVASELINE yake paPILLOW paanongo pepuka hope dzapera tanga kuDhonza ipapo usamirire kuti ndakanzi kuSeni neManheru dhonzayi pese pamunenge maita nguva.
MADZIMAI musanyeperwe nevasina vachiti MATINJI AHAITE iwewe munhu kana uriwe uri kuchida DHONZA wega.
The process of labia stretching involves kudhonza pulling or kurembedza weighing down the inner labia, or labia minora, in order to elongate them. It started as a cultural tradition in parts of ancient Africa, Asia, but has since been adopted by some Western cultures, though on a much smaller scale. It is primarily done for appearances and sexual enhancement. Nekuti variko vamwe vanhu vakudawo kuteedzera Chirungu, uye variko varungu vari kuteedzera chiVanhu, chakanakira murungu ahashore zvaada kuita anoita. Uye anobvunza kana varume kuti zvinobatsira chiiko.
Murungu akaona mukadzi ane MATINJI hanzi zvino tadzisa Mukadzi kuzvara Seiko vachidaro, nekuti vanenge vakura vachinzi zvakaipa. Asi nekufamba kwenguva varungu vamwe vakaona kuti Matinji akanaka kwaVari vakatanga kugadzira kaMACHINE kanoDhonza MATINJI kutaura kuno varungu ndivo vakuita MATINJI maBlacks muchiti ndezvekare.
Kare zvainzi kurasa Tsika dzeRudzi rako Mazuvano zvakunzi kuChinjana Tsika neVarungu Varungu vakuti Matinji anobatsira kuchengete NHENGO YEMUKADZI NYORO.
MADZIMAI SHANDISAYI VASELINE KUDHONZA MATINJI. Uye zivayi kuti muri kudhonza MATINJI chaivo here kana kuti muri kudhonza Muromo weNHENGO YEMUKADZI.